Fitantanana orinasa mba hahomby Tolotra miavaka no omen’ny Openflex
Mitohy hatrany ny fanomezana avy any amin'ingahy be Noely ao amin'ny Openflex. Na efa volana febroary aza izao, dia mbola mahita atolotra ihany ity orinasa ity hanomezana fahafaham-po ny maro. Ho an'ireo izay izao vao mahafantatra, ny Openflex dia rindrambaiko na “logiciel”
Vola tsy ampy eny amin’ny banky Mamono mpandraharaha
Tsikaritra tato ato ny fahalanian’ny vola vaovao indrindra ireo vola taratasy majinika (petite coupure) teny amin’ny banky. Iaraha-mahalala anefa fa ilaina tokoa izy ireny satria manamora ny fifanakalozana ara-barotra andavanandro.
Fidangan`ny vidim-piainana Mahakivy sy mahaketraka ny isan-tokantrano
Miakatra avokoa ny vidim-piainana ankehitriny, asa na hanao ahoana ihany fa dia tena mahakivy sy mahaketraka.
Kaominina Mahitsy RN 4 Mitohy ny disadisa ao amin’ny tsena
Tsy manam-pahataperana ny disadisa ao amin’ny tsenan’i Mahitsy RN 4. Heno indray mantsy izao fa nametraka fitoriana an’ny ben’ ny tanànan’i Mahitsy sy ireo mpanolotsain’ny tanàna sasany ary ny “commandant brigade Zp” ao an-toerana sy ny sefom-pokontanin’Antandrokomby ny lehiben’ny tsenan’ny kaominina ao Mahitsy, Maminiaina Johnny Rakotondranaly, omaly.
Tetibolan’ny CUA nasiam-panitsiana Nolanian’ny Filankevitra monisipaly
Lany tao anatin’ny lahadinika tsy ara-potoana izay notontosain’ny Filankevitra Monisipalin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra nandritra ny 3 andro nifarana omaly alarobia 21 febroary 2018 ny Tetibola nasiam-panitsiana.
ZES Madagascar Tsy maharesy lahatra an`ireo mpamatsy vola
Efa an-taonany no nanomanana sy nikotrehina ny volavolan-dalàna niaraka tamin’ireo “Consultant international” mahakasika ny fametrahana ny tetikasa Faritra ara-toekarena manokana na ZES eto Madagasikara.
Tsy afaka namokatra ireo toerana mpamatsy vary an’i Madagasikara noho ny toetr’andro izay niaraha-nahalala. Tsy mahavaha olana anefa ny fanjakana fa toa zary miala andraikitra sy manipy baolina any amin’ireo mpandrahahara hatrany. Raha ny fanjakana no tokony hanafatra vary mivantana manoloana izao efa fahasahiranana mandifotr’olona izao, dia mbola ankinina amina mpandraharaha tsy miankina izany, ka misy ny manararao-paty, toy ny fahatrarana 200 taonina nasitrika tany Toamasina ny herinandro lasa teo. Tsy voafehy mihitsy ny fanaraha-maso ny tsena eto amintsika, ka anjakan’ny fanararaotana isan-karazany. Ny herinandro teo ihany dia efa nilaza ny eo anivon’ny minisiteran’ny varotra sy fanjifana fa tsy tokony hisy fiantraikany amin’ny vidin’entana intsony ny fahatapahan’ny lalana tany amin’ny lalam-pirenena isan-tsokajiny satria efa niverina amin’ny laoniny ny ankamaroany, ary efa niverina amin’ny laoniny avokoa ny famatsiana amin’ny ankapobeny. Tsy arakarak’izay anefa ny zava-misy fa vao mainka midangana ny vidim-bary izay efa mahatratra 540 ariary ny iray kapoaka ho an’ny eto Antananarivo raha manodidina ny 450 ariary izany tapa-bolana lasa izay. Efa tena tambajotrana “mafia” mpanararaotra mihitsy no ao ambadik’izao fanararaotana izao, raha ny fanamarihan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa, ka baiko tokana no misy dia miakatra avokoa ny vidiny. Toa tsy manam-bahaolana anefa ny fanjakana fa lany andro amin’ny kabary ambony latabatra matoa tsy mivaha ny olana.